I-Emoji Mic Ukulanda Kwe-Android [Uhlelo Lokusebenza Lwephazili] - I-Luso Gamer
Ukulanda kwe-Emoji Mic Okwe-Android [Uhlelo Lokusebenza Lwephazili]
January 24, 2022 by John Smith
Sesikubhalile kakade ukubuyekezwa okuningiliziwe kuhlelo lokusebenza olufanayo oluhlobene. Kodwa lapha namuhla silethe okuthile okusha nokuhlukile kubadlali bamageyimu okubizwa nge-Emoji Mic Apk. Ifayela lohlelo lokusebenza liyafinyeleleka ukuze lilande kusuka lapha.
Ukuhlanganisa uhlelo lokusebenza ngaphakathi kwe-smartphone ye-Android kuzovumela abasebenzisi be-Android. Ukukhiqiza izithonjana ezingapheli futhi uguqule lezo ezihlanganisa izinkulumo nezinto ezahlukahlukene. Uma usuphumelele ukuxuba ama-emotes.
Bese ekugcineni, kuzovela uhlobo olusha oluxubile lwe-emote esikrinini. Okubukeka sengathi kuyahlekisa futhi kuphuma ebhokisini. Yize ama-emojis anjalo engabelwe ngokuqondile ku-inthanethi. Kodwa sathola izinhlelo zokusebenza ezinjalo ezihlekisayo futhi zibulala isikhathi. Ngakho-ke ungathanda ukuhlola eyodwa bese ufaka i-Emoji Mic App.
Yini i-Emoji Mic Apk
I-Emoji Mic Apk uhlelo lokusebenza lwe-Android oluhlobene nephazili oluklanywe i-Unicode Games. Inhloso yokuhlela umdlalo wegeyimu ukuhlinzeka ngenkundla. Lapho abathandi be-emote nabalandeli bengakhiqiza khona kalula umlingiswa we-anime osuselwe kwimizwa
Umqondo we-emote wethulwa okokuqala ngaphakathi kwemilayezo. Okujwayelekile namuhla futhi okusetshenziselwa ukukhombisa izinkulumo ngenkathi ukuguqulwa. Kodwa uma sihlola izinketho ezifinyelelekayo ngaphakathi kwemilayezo yombhalo enjalo.
Bese kutholwa kunqunyelwe futhi kukhawulelwe, kuze kuphoqe abasebenzisi ukuthi bafake ama-emotes afanayo kaningi. Nokho ngokuhamba kwesikhathi lapho abantu beqaphela imingcele. Bese uqala ukucinga amanye amathuluzi angcono kakhulu angabasiza.
Kodwa ayikwazi ukuthola eyodwa engasiza abasebenzisi ekwakheni ama-emoji asuselwa kumizwa ahlukene. Okubukeka kuhlekisa futhi kuyingqayizivele. Nokho, abathuthukisi baphumelele ukuletha lolu hlelo lokusebenza oluhle kakhulu olubizwa nge-Emoji Mic Download.
Igama I-Emoji Mic
Unjiniyela Imidlalo ye-Unicode
Igama lephakheji com.UnicodeGames.DefaultProject
Isigaba Apps - Puzzle
Okumahhala ukufinyelela ku-inthanethi futhi akudingi ukubhalisa noma ukubhaliswa. Ngaphandle kokuhlinzeka ngezinhlamvu eziningi ze-anime ngaphakathi, uhlelo lokusebenza luphinde lusekele lesi senzo ngokwezifiso esibukhoma. Manje besebenzisa isilungisi esithile, abasebenzisi bangakwazi ukukhiqiza ama-emoji amaningi asekelwe kwimizwa.
Lezo zibukeka zihlekisa kakhulu futhi zihlukile kwezinye ezifinyelelekayo. Nakuba singakwazi ukufakaza noma iyiphi inketho yokusebenzisa ngokuqondile ngaphakathi kohlelo lokusebenza. Kodwa onjiniyela bayaqhubeka nokusebenza kuzici ezithile ezivumela abasebenzisi ukuthi bafake ama-emotes ngaphakathi kwamabhokisi ombhalo.
Onjiniyela bathi basebenza ngezinketho ezithile futhi bangafinyeleleka ukuze basetshenziswe ezinsukwini ezizayo. Kodwa kuze kube namuhla, le nketho ayifinyeleleki. Ngisho nathi asikwazi ukuthola inkinobho yokwabelana evumela abasebenzisi ukuthi babelane ngama-emotes ngokuqondile.
Sithole uhlelo lokusebenza lwephazili lulula futhi lusebenziseka kalula. Ngisho nokufaka uhlelo lokusebenza kuzodla izinsiza ezimbalwa nesikhala. Ngisho nokusebenza kwefayela lohlelo lokusebenza kubonakala kulula futhi akudingi iseluleko sochwepheshe noma amakhono.
Ngakho-ke uyazithanda izici ze-pro zohlelo lokusebenza futhi uhlale ufuna ukuthola inkundla ye-inthanethi. Lokho kuvumela abasebenzisi be-smartphone ukuthi bakhiqize amathuba angapheli nezinketho zokudala i-emote. Bese sincoma ukuthi lezo zilande i-Emoji Mic Android.
Ukufaka uhlelo lokusebenza kunikeza okwenziwa ngezifiso okubukhoma ku-inthanethi.
Lokho kuvumela abasebenzisi ukuthi bakhiqize ama-emoji angapheli.
Izinketho ezintathu zezinyathelo eziningi ziyengezwa.
Isinyathelo ngasinye sivumela umsebenzisi ukuthi alayishe izinhlamvu ezihlukile ze-anime.
Ukuhlanganisa zonke izinhlamvu ezintathu ze-anime ezilayishiwe kuzokhiqiza opopayi abahlukile.
Izikhangiso ezivela eceleni azivunyelwe.
I-App interface ibonakala ilula.
Ungalanda Kanjani I-Emoji Mic Apk
Laphaya amawebhusayithi amaningi athi ahlinzeka ngamafayela e-Apk afanayo mahhala. Kodwa empeleni, lawo mawebhusayithi anikela ngamafayela mbumbulu nawonakele. Ngisho nefayela le-Apk liyafinyeleleka kusuka kusitolo sokudlala. Kodwa ama-smartphones akamuva kuphela avunyelwe ukulanda uhlelo lokusebenza kusuka lapho.
Lokhu kusho ukuthi abasebenzisi be-smartphone abadala abakwazi ukufinyelela uhlelo lokusebenza. Ngakho esimweni esinjalo lapho abasebenzisi bengakwazi ukulanda uhlelo lokusebenza kufanele bavakashele iwebhusayithi yethu. Ngoba kusuka kuwebhusayithi yethu, abasebenzisi bavunyelwe ukufinyelela i-Emoji Mic Nge-TikTok mahhala ngokuchofoza okukodwa.
Sesivele sishicilele futhi sabelane ngohlelo kuwebhusayithi yethu. Ngaphambi kokukunikeza ngaphakathi kwesigaba sokulanda, safaka uhlelo lokusebenza kuma-smartphones ahlukene. Ngemva kokufaka i-Apk sithole ibushelelezi futhi isebenza.
Inqwaba yezinye izinhlelo zokusebenza ze-Android ezifanayo ziyashicilelwa futhi zabelwane ngazo lapha kuwebhusayithi yethu. Ukuhlola lezo ezinye izinhlelo zokusebenza ezihlobene sicela uchofoze isixhumanisi esinikezwe ngezansi. Okukhona I-Emojimix Apk futhi I-Emoji Font 3 Apk.
Leli yithuba elingcono kakhulu labathandi be-emoji lokukhiqiza izithonjana eziningi ezihlukile mahhala. Abadinga ukukwenza nje ukulanda inguqulo yakamuva ye-Emoji Mic Apk kusuka lapha. Futhi faka ukuze ujabulele ukwakha izinhlamvu ze-emote ezingapheli mahhala.
Izigaba Puzzle, Apps Amathegi I-Emoji Mic ye-Android, I-Emoji Mic Apk, Uhlelo lokusebenza lwe-Emoji Mic, Landa i-Emoji Mic Imeyili kwemikhumbi
I-FireLiker Apk Download 2022 Ye-Android [Uhlelo Lokusebenza Olusebenzayo]
Ukulanda kwe-TagMo APK ye-Android [Amiibo 2022]